Dagaal ka Dhacay Deg. Hoosingow ee J. Hoose
Wararka ka imanaya deegaanka Hosingow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu kaasi ka dhacay dagaal la sheegay inuu dhexmaray ciiidan taageersan dowladda Somalia iyo kuwa ka tirsan ururka Raaskaanbooni ee Axmed Madoobe.
Si rasmi ah looma oga sababta uu dagaalkan u bilowday iyo waliba haddii uu jiro khasaare uu dagaalku dhaliyay, balse Mahad Maxamed Islaam, oo ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan Afmadow, ayaa dagaalkan ku eedeeyay ciidamada Kenya, isagoo sheegay in ciidanka dowladda ay u diideen sida uu hadalka u dhigay inay tagaan magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, Farxaan Abdi Afdhuub oo ka tirsan ururka Raaskaanbooni ayaa sheegay in dagaalku uu dhexmaray ciidamada wada degan Hoosingow oo si kama ah isugu dhacay, wuxuuna beeninay in ciidanka Kenya ay dagaalku ku lug leeyihiin.
Waxaan iskudaynay xiriirro dhinaca AMISOM iyo ciidamada Kenya si aan dhinacooda uga ogaano dagaalka ka dhacay Hoosingow, balse xiriiradaasi maysan suurto galin.